Global Voices teny Malagasy » Ireo endriky ny haintany ao Kiobà · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Desambra 2019 6:14 GMT 1	 · Mpanoratra Periodismo de Barrio Nandika (fr) i Amina Grine, Annick Battesti, Willy Mokhtari, Charlène Brault, Florencia Domanico, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Kiobà, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Mpamboly tanamasoandro ao akaikin'ny faritry ny tempoly masin'ny Virgen de la Caridad del Cobre i Deivi. Sary an'ny Periodismo de Barrio . Tsy natao hitadiavam-bola. Zaraina araka izay fepetra napetraka aminy 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0) .
Ity lahatsoratra ity dia vokatry ny fiarahana miasa amin'ny gazety kiobàna iray ety anaty aterineto Periodismo de Barrio  [gazetim-bohitra]. Noho io fiarahana miasa io, ho azon'ireo mpamaky anay atao ny mamantatra ilay firenena, tsy araka izay fomba nanolorana azy hatrizay teny anatin'ireo gazety nahazatra.
Manome endrika lalantsara mamakivaky kaominina 11 amin'ireo faritanin'i Santiago de Cuba sy Guantánamo ny faritra atsimo-atsinanan'i Kiobà. Samy voadona daholo tamin'ny haintany ireo mponina 1.300.000 ao aminy, na mivantana, na ankolaka. Ny fandosiran'ny mponina tsikelikely an'ireo faritra ambanivohitra no tena endrika goavana manohintohina ny ain-dehiben'io faritra io : ny fifindramonina ateraky ny fiovàn'ny toetrandro. Ity ny tantaran'ireo nisafidy ny hitoetra. 
Miandry i Reinaldo
Reinaldo Mestre. Sary an'ny Periodismo de Barrio . Tsy natao hitadiavam-bola. Zaraina araka izay fepetra napetraka aminy 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0). 
Efa (tena) ela (loatra) izay, naniry hamboly kafe sy akondro tao amin'ny ampahan-taniny i Reinaldo Mestre saingy nilazàna izy tsy hanao izany. Ary dia tsy nataony, satria teo, tena teo amin'ny toerana niriany hovolena, no tokony handalo ilay arabe migodana indrindra ao amin'ny nosy.
Tamin'ny 1981 i Reinaldo no tonga tao El Socorro, iray amin'ireo vondron'olona nipetraka teo amoron'ny arabe afovoany [fr] , anelanelan'ny vohitr'i Songo sy ny Maya ao Santiago de Cuba; mbola tena toy ny tena izy ilay nofinofy hanao ny A1 làlam-pirenena migodana – tokony nampifandray an'i Kiobà manontolo.
Saingy tany ampiandohan'ireo andian-taona sivifolo sy taorian'ny nirodanan'ny sosialisma tany Eorôpa, voatery natsahatr'i Kiobà ny fanamboarana ilay lalambe migodana A1 ary nozaraina ho an'ny mpamboly ireo ampahantany tao ‘el Socorro’ mba tsy ho tany lava volo, ka ho afaka hamokarana sakafo tao anatin'ny krizy ara-toekarena namely ny firenena. Nahazo iray tamin'ireny ampahantany ireny i Reinaldo.
Tamin'izany fotoana izany, nilazana ry zareo fa vonjimaika ihany ny zavamisy mandra-piverin'ny asa indray. Ary satria mety hitranga amin'ny fotoana rehetra izany, dia tsy tokony hiditra aminà fambolena ilàna miandry fotoana lavabe vao otàzana ry zareo, toy ny kafe. Izay aloha, farafahakeliny, no nolazaina tamin-dry zareo tamin'izany fotoana izany, ary dia narahan'i Reinaldo, fatra-pankato, ireo torolàlana.
Lasa naharitra ela be ilay nolazaina fa vonjimaika, ary dia tavela tamin'izay nisy azy hatrizay ilay sisin-dàlana tsy vita, efa ho telopolo taona lasa izao: any amin'ny 12 kilaometatra eo ho eo miala an’ Songo. Nandritra izay fotoana ela izay, miaraka amin'io ampahantany kely miankina tanteraka amin'hy fisian'ny orana io, tsy misy fotodrafitrasa famatsiana rano sady tsy misy rano mba hampamokarana azy, niforitra niandry i Reinaldo ary nanonofy ny tany famboleny kafe. Ary arakaraky ny niandrasany, lany teo ny androm-piainany manontolo.
Ankehitriny, ao anatin'ny faha-85 taonany, efa tsy manana afa-tsy voa (rein) iray intsony, sy vola 200 pesos, mbola ao El Socorro foana i Reinaldo; eo amin'ilay ampahantany nisy azy hatrizay izay tsy mahavokatra mba ho azo amidy akory; ao anatin'ilay tranohazony hatrizay, mitafo tanimanga, gorodona tanimena ary tsy misy rano fisotro madio.
Hatreto ilay nofinofy tsy tanteraka hanaovana lalambe migodàna dia nijanona ho tsipika fotsiny anaty sarintany, tetikasam-pampandrosoana tsy tontosa ary niteraka ny fampiandrasan'i Reinaldo ireo nofinofiny.
Adela sy ny lavadrano
Adela Pantoja. Sary naverina navoaka miaraka amin'ny fanomezandàlan'ny Periodismo de Barrio .Tsy natao hitadiavam-bola. Zaraina araka izay fepetra napetraka aminy 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0) 
Naniry ny ho tonga mpanampy mpitsabo (infirmiera) i Adela Pantoja. Saingy rehefa nahavita ny fianarana ambaratonga faharoa izy tao ‘La Isla de la Juventud (nosin'ny hatanoràna), tany amin'ny taona sivifolo tany, dia tsy maintsy niverina tao « La Loma », toerana nahaterahany izay any amin'ny roapolo kilaometatra miala an'i Madrugón, any Santiago de Cuba no misy azy. Mba hikarakara ireo ray sy reniny efa antitra sy tsy salama, sy hiasa eny an-tsaha. Teo amin'ny faha-19 taonany izy no nanomboka nisa teny an-tanin-kafe. Niteraka teo amin'ny faha-20 taonany. Teo aminn'y faha-30, niaraka tamin'ny zanany 2, nihaona tamin'i Mayito izy, lehilahy iray nisara-bady ary 42 taona. Niaraka ry zareo ary lasa nandeha niara-nipetraka taminy izy. Mba hiasa eny an-tsaha.
Nanomboka teo, dia mitovy foana ny andavanandrom-piainan'i Adela. Mifoha amin'ny 5 ora maraina, mikarakara ny sakafo maraina dia mandeha mankany amin'ny toeram-piompiana. Amin'ny 11 ora, apetrany ny angadikely fiavàny dia misakafo. Avy eo, mikarakara ny kafe, mandio zaridaina, mamafa ary manome rano ho sotroin'ireo biby fiompiny. Amin'ny 3 :30 tolakandro, miverina eny an-tsaha ary tavela eny hatramin'ny maizim-be. Ny hany fotoana fialàny sasatra dia izy rehefa mipetraka fotoana vitsy mba mijery fahitalavitra.
Ezahako ny miresaka aminy hanazavàny ny fomba famboleny ny tany any amin'ny iray amin'ireo faritany tena maina indrindra ao Kiobà, saingy i Mayito no mitantara, manitsy ireo datin'andro ary farany dia lasa nifehy tanteraka ny resadresaka.
Nolazainy fa, nandritra ilay haintany tamin'ny telo taona lasa, izay niafara tamin'ny fahafatesan'ireo ondry sy omby rehetra fananan-dry zareo, tsy tafavoaka velona ry zareo raha tsy teo ny lavadrano. Io lavadrano io no fon'ilay toeram-piompiana mirefy fito hektara, ahafahana mioty tsaramaso iray taonina sy sasany isantaona, na manapaka salohin'akondro miisa 60 ao anatin'ny tolakandro iray mba ho alefa any an-tsenan'i Santiago de Cuba.
Telo volana mhery teo no nilain-dry zareo nananganana izany rehetra izany. Fito amby sivifolo andro mba hanokafana lavaka iray mirefy 17 metatra ny halaliny. “Lapika iray monja no nampiasaina” hoy izy namerina mba hanipihany ny zavabitan'ilay ankohonana. Amin'ny feo malefaka i Adela no manazava fa tany aloha, nisy lavadrano iray hafa fa ritra, dia nikaroka ry zareo, nikaroka ary nahita ity iray ity, folo metatra teo ho eo niala tamin'ny toerana nisy ilay iray teo aloha. Milaza i Adela fa tsy izy no mandavaka, fa niaraka tamin'ny fanampian'ny ampondrany, izy no nitaona ireo tany marobe nesorina. Vakiany amiko ny voasoratra eo amin'ny sisin'ilay lavadrano :
- Izao no vakin'ity : “Daty nanombohana, 10/12/2011. Vita tamin'ny 15/03/12, ho fankalazana ny tsingerintaonan'ny zanakovavy Mayelín. Ity fotodrafitrasa ity dia nataon'i Osmay Tejeda, Yordanis Tejeda, ny ampondra Clavel, ny ombilahy Coronel … “.
- Ary ianao, Adela …? – hoy aho nanontany.
-Ah, dia izahay …
Nefa ny anarany tsy eo.
Nieves mahandro ho an'ny iray tanàna
Nieves Mojena. Sary naverina navoaka miaraka amin'ny fanomezandàlan'ny Periodismo de Barrio .Tsy natao hitadiavam-bola. Zaraina araka izay fepetra napetraka aminy 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0) .
Rehefa manodidina ny amin'ny 6 ora, manomboka mandeha mamonjy ny toeram-pamboleny kafe ireo tantsaha, ary ren'i Nieves ny figadongadon-dry zareo, ny takoritsika, ny feon'ny mangiran-dratsy. Dia miarina izy ary mampangotraka rano hisasàna sy hkarakaràna ny kafe.
Tamin'ny 1984 i Nieves Mojena no tonga tao Arroyo Llano mba hitsidika ny rahavaviny. Nanambady izy ary dia nijanona ao. Niasa nandritra ny fotoana fohy izy, tao amin'ny tranon'ny fahitalavitry ny tanàna, avy eo nanao mpiambina tao amin'ny sekoly. Farany, nanaraka fiofànana momba ny hainahandro dia nanapaka hevitra, 12 taona lasa izay, ny handray an-tànana samirery ny fikarakaràna ny lakozian'ny Kaoperativa fampindramambola sy mpanome tolotra “Romárico Cordero”, izay midika, raha ny marina, fa mahandro ny sakafon'ny iray vohitra mihitsy. Ao anatin'ny faha-dimampolo taonany, mena volo, taitaitra, kajiany ny isan'ireo mpiasa lasa any an-tsaha dia avoakany ny fatra tena ilaina amin'ny sakafo hatramin'ny kafe. Androany izao, ohatra, vary 4 kg no nokarakarainy (iray vilany be), dia avy eo pitipoà 1 kg sy sasany (2 kaserôly), akondro ‘plantain’ nahandroina ary singan'akoho ho an'ny tsirairay, tongony na feny. Indraindray izy mahandro “chilindrón de chivo (fricassé de cabri mampiavaka an'i Kiobà), hena kisoa na “mortadelle” nasiana saosy.
Amin'ny 11 ora sy sasany, mandanja ny voa voaangony ireo mpioty dia miala sasatra. Oran'i Nieves io : tamy izy. Tiany ny tonga ara-potoana, satria, araka ny filazany, «mampitombo ny fahafaha-mamokatra izany. Manangona koa aho, mba tsy ho avo loatra ny tahan'ny fiotrehana ary mba tsy ho veivery foana ny kafe». Isaky ny daba tsirairay, mahazo vola fanampiny izy. 500 pesos isambolana ny karama maha-mpahandro azy (20 euros latsaka kely eo).
— Eritreritray ny hanangana trano eny an-tany fambolena kafe dia eny ihany no mahandro. Mora kokoa izay, satria manokona aho dia lasa mitondra harona, manangona kely, miverina manamarina ny aty vilany….Amin'izay dia mihinana mafàna ry zareo.
Rehefa fohy ny andro iasàna, mirava amin'ny 3 ora tolakandro i Nieves ; rehefa lava ka manomboka ho alina dia hoy izy «Rehefa tafaverina aho tamin'ity tolakandro ity, nikarakara ‘congri’ (vary sy tsaramaso mainty), ary miaraka amin'ny akoho nandrahoako ho an'ny ao an-tokantrano, efa vonona ny sakafo » (ny kaoperativa no mandoa ny sakafo antoandron'ireo mpiasa, ary ny any ao an-tokantrano kosa dia azy sy ny vadiny). Ny alina, mikarakara sakafo maivana izy dia mijery fahitalavitra. Mandra-panapikan'ny foibe mpanome herinaratra rehefa tonga ny amin'ny 10 ora alina, fotoana mampitankizina anaty haizina ny vohitra iray manontolo, dia avy eo miandry indray ireo tantsaha manainga ho any an-tany fambolena izy.
Nena. Sary naverina navoaka miaraka amin'ny fanomezandàlan'ny Periodismo de Barrio .Tsy natao hitadiavam-bola. Zaraina araka izay fepetra napetraka aminy 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0) 
60 taona eo ho eo i Nena – tsy dia hainy tsara intsony – manana sombin-tany kely iray izy, novoleny akondro, tsaramaso, vomanga, ary sombiny kely iray any amin'ny 1 kilaometatra eo ho eo miala an'i “El Socorro”, vohitra iray rava amin'ny antsasany ao Alto Songo. Nena irery no namafy, izy irery koa no nijinja, ary io asa io no namelomany ireo zanany, satria indray andro izay izy dia nahita ny vadiny niaraka taminà vehivavy iray hafa, niady ry zareo ary navelan-drangahy teo izy sy ny zanany dimy. “Nanomboka teo, tsy nanambady intsony aho no sady tsy mila intsony”.
Misy herinaratra sy trano kely fidiovana any ivelany ilay tranobongo ipetrahany. Ny rano indray, tsy maintsy mantsaka na miandry orana hilatsaka. Mandeha any amin'ny lavadrano isanandro i Nena, mikapa sy miloloha kitay entina mody. Mampiasa solitany izy hahandroana sakafo, izay anjara raisiny isaky ny telo na efatra volana arakaraky ny fetra omena: 12 tavoahangy indray manolotra. Efa feno 40 taona ireo zanany ary efa nandao ny tokantrano. Very tadidy tsikelikely i Nena arakaraky ny itomboan'ny taonany. “Mifoha aho ny maraina ary raha tiako; dia mandeha any an-tany fambolena, raha tsy tiako, tsy mandeha any aho. Manan-draharaha aho ato an-trano”: ny tafo vita tanimanga, ny fanaka efa vasobasoka, ireo lavadavaka eny amin'ny gorodona, takamoa iray, ny somambisamby, ny tanimena, ary ny alahelo.
Georgina Castillo, renin'i Nena, dia manana trano falafa kely iray eo alohan'ny tany fambolena akondro ary milaza fa 60 taona, saingy tsy tsaroany tsara. Araka ny lazan'i Nena, efa any amin'ny 80 taona any izy. Vehivavy mainty hoditra mahafinaritra, vokoka saingy mandondona, ny fahamboniana tsy misy fangarony. Niteraka fito izy. Hatramin'ny fotoana ela, nanana ny zaridaina famboleny i Georgina, fa ankehitriny na angady aza tsy vitany intsony ny manainga azy. Ny zanany vavy no miahy azy. Miara-monina izy ireo, samy manna ny tranony.
Roa andro izao i Nena no tsy nandeha tany an-jaridainany. Nanàla ny bozaka teo amin'ny tany famboleny no farany nankanesany tany. Hatreto aloha, mikarakara ireo kisoa vavy roa bevohoka ao am-bala izy. Mahasambatra azy ny mahita ny iray amin'ireo zazany tonga mitsiditsidika azy matetika. Amin'ny ankamaroan'ny fotoanany, dia manirery eo i Nena sy Georgina, tsy mahafantatra akory hoe andro inona ny anio, na izay nataon-dry zareo ny omaly.
El Caney mpivarotra rano
Ao amin'ny vondrompiarahamonina ao El Caney, Santiago de Cuba, no mipetraka i Kikito, lehilahy iray tsy antitra tsy tanora, mpitatitra rano ho an'ny isan-tokantrano. Androany, tena nandrandraina be izy noho ny haintany mamely ao amin'ny faritra.
Ireo tanamasoandron'ny Virijiny
Tsy lavitra ny tempoly masina ao El Cobre, mamboly tanamasoandro i Deivi, iray amin'ireo zavatra fanao fanatitra ho an'ny Virijiny Be Fiantra ao El Cobre. Ao anatin'ity lahatsary ity, tantarainy amin'ny teny espaniôla ho antsika ny fomba ahavitàny mamboly ao Oriente manontolo (faritra atsinanan'i Kiobà), na eo aza ny haintany.
*Ampahan-dahatsoratra navoaka manokana ho an'i Global Voices izy ity. Afaka ataonao ny mahita ny lahatsoratra niandohana ato amin'ity rohy  ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/02/143227/
 Tsy natao hitadiavam-bola. Zaraina araka izay fepetra napetraka aminy 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0): https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_CO
 Periodismo de Barrio: http://www.periodismodebarrio.org/
 arabe afovoany [fr]: https://fr.wikipedia.org/wiki/Carretera_Central